မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့ YSE ကနေ မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ “မေးခွန်းဘာကြောင့် မေးသင့်လဲ"ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးအတွက် အဖြေ (၆)ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းတွေ မေးတယ်ဆိုတာကတော့ အောင်မြင်မှုကို ရောက်ရှိစေမယ့် ပထမဆုံးခြေလှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့မေးခွန်း လိုအပ်တဲ့မေးခွန်း များများမေးခြင်းဟာ မိမိကို အဖြေမှန် ရှာတွေ့စေပြီး မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် ခေါ်ဆောင်ပေးမှာ မလွဲဧကန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခု အမေးခံရလို့ ဖြေတဲ့အခါ “ရပါတယ် (fine)” ဆိုပြီးဖြေလိုက်ခြင်းဟာ မိမိကို လိုရာရောက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မေးခွန်းတစ်ခုအတွက် အဖြေကို ကိုယ်ရော စိတ်ရော ခံစားပြီး ဖြေမှသာ လိုရာ ခရီးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ မေးခွန်းများမေးတတ်ခြင်း အလေ့အထရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၆) ခုကို ပြောပြပေးသွားပါပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) မေခွန်းမေးခြင်းဖြင့် ဘဝအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်
သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက် တွေ့ရှိချက်များအရ လူတွေဟာ ဘဝအကြောင်းကို မေးခွန်းတွေကတစ်ဆင့် လေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့အရာတွေကို စူးစမ်းရင်း စမ်းသပ်ရင်း “ဘာကြောင့်” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ မေးရင်း လေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းမေးခြင်းအားဖြင့် ကလေးငယ်တွေဟာ အကျိုးနှင့်အကြောင်း ဆက်စပ်မှုတွေကို လေ့လာကြရပါတယ်။
(၂) မေးခွန်း များများမေးလေ အဖြေကောင်းကောင်းရလေ ဖြစ်ပါတယ်
လူတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးလာပြီး တာဝန်ဝတ္တရား​တွေ များလာတဲ့အခါမှာ မေးခွန်းတွေ ဆက်မမေးတော့ဘဲ မိမိလေ့လာထားတာလေးတွေနဲ့ ဘဝခရီးကို ဆက်လျှောက်ကြပါတယ်။ ဒီလေ့လာထားတာတွေက မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာတော့ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေဆိုပြီး ဖြစ်လာပါတယ်။ ပုံမှန်မှာဆိုရင်တော့ လူတွေဟာ အခက်အခဲတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်အရင်က ဒီလိုဟာမျိုး (သို့) နီးစပ်တဲ့ဟာမျိုး ကြုံဖူးလားဆိုပြီး စဉ်းစားပြီး အရင်အတွေ့အကြုံမှာ သုံးခဲ့တဲ့ ဖြေရှင်းပုံကိုပဲ သုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ယုတ္တိမရှိတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေလည်း လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို အချိန်မှာ အတွေ့အကြုံ များများရှိတဲ့သူက ပိုသာတာ အမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေ အတွေ့အကြုံတွေ များများရှိတဲ့သူမှာ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း များများရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၃) မိမိဘဝရဲ့ အရည်အသွေးဟာ မိမိမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်
မိမိဘဝရဲ့ အရည်အသွေးဟာ မိမိရဲ့ စဉ်းစားဉာဏ် အရည်အသွေးနဲ့ အများကြီး ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မိမိရဲ့ စဉ်းစားဉာဏ်ဟာ မိမိမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာဆိုရင်တော့ မေးခွန်းတွေဟာ မိမိတို့ စဉ်းစားဉာဏ်ရင့်သန်တွေမယ့် မောင်းနှင်အားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၄) မေးခွန်းမေးခြင်းဟာ မိမိကို အမြင်ကျယ်စေပါတယ်
မေးခွန်းမေးခြင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဦးနှောက်မှာ ပုံစံအသစ်တွေ အညွှန်းအသစ်တွေ ဖန်တီးပေးပါတယ်။ လမ်းကြောင်းအသစ်တွေ များများရှိလာလေ မိမိရဲ့ဦးနှောက်ဟာ ပိုပြီးပြောင်းလွယ်လေလေ ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းစည်းထားတဲ့ အချက်အလက်များများ ပိုထုတ်ပေးနိုင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) မေးခွန်းမေးခြင်းဟာ မိမိကို ပိုပြီး ချင့်ချိန်ဆင်ခြင်တတ်စေပါတယ်
မေးခွန်းများများမေးပြီး အမြင်ကျယ်လာတဲ့အခါမှာ ယခင်ကလို ကိုယ်စွဲတွေ မရှိတော့ဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာလည်း ပိုမိုဆင်ခြင်တတ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၆) မှန်ကန်လိုအပ်တဲ့ မေးခွန်းမေးခြင်းဟာ မိမိကို ပျော်ရွှင်စေပါတယ်
ပိုမိုနားလည်ရခက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေ (ဥပမာ - မိမိဘဝမှာ ဘာက အရေးအကြီးဆုံးလဲ? မိမိအတွက် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဘာလဲ ?) အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးတဲ့အခါမှာ မိမိကိုယ်မိမိ ပိုမိုလက်ခံနိုင်ရုံသာမက မိမိအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပါ လုပ်ဆောင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်လာနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ YSE ကနေ မျှဝေပေးသွားတဲ့ “မေးခွန်းဘာကြောင့် မေးသင့်လဲ"ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးအတွက် အဖြေ (၆) ခုကို အားလုံးနှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်အပတ်တွေမှာလည်း ဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးတွေ ဆက်လက်မျှဝေသွားမလဲဆိုတာကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦး။ အချိန်ပေးဖတ်ရှုပေးကြတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။